यिनले किन खेले खुर्सानीको तलाउमा पौडी ? (भिडियोसहित) — Bhugolnews
यिनले किन खेले खुर्सानीको तलाउमा पौडी ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । दक्षिण चीनको हुनान प्रान्तमा वार्षिक रूपमा खुर्सानी प्रतियोगिता मनाइने गरेको छ । प्रतियोगितामा खुर्सानी खानुपर्छ अनि खुर्सानीको तलाउमा नुहाउनुपर्छ । एक व्यक्तिले तलाउमा नुहाए अनि एक मिनेटमा ५० वटा खुर्सानी खाइदिए ।
‘विर विक्रम २’को दोश्रो गीत ‘वाचा कसम’ सार्वजनिक
टाइगर श्राफको ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर २’ को ट्रेलर सार्वजनिक
ब्याक टु ब्याक हिट गीत दिँदै विष्णु माझी
‘प्रेम दिवस’को ‘बरु अर्को जुनी’ रिलिज (भिडियो)
शिव परियारले ल्याए ‘आँशुको अर्थ २’